बेसाहाराको साहारा बन्दै पुर्नजीवित विनयको कथा - बेसाहाराको साहारा बन्दै पुर्नजीवित विनयको कथा
बेसाहाराको साहारा बन्दै पुर्नजीवित विनयको कथा
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २१ पुष, 02:31:53 PM
बेवारिसे शव विनयजंग बस्नेतको हक
♦ माया श्रेष्ठ ♦
काठमाडौं । मान्छेहरु जिउँदालाई सेवा गर्दा रमाउछन् अझबढी मरेसकेपछि काजक्रिया र पितृ तपर्ण अथार्त श्राद्ध गरि पुण्य कमाएको भन्दै मख्ख पर्छन् । तर त्योभन्दा बढी रमाउने अनि आन्नदित हुने गर्छन् बेवारिसे लासहरुलाई जलाएर विजयजंग बस्तेत । समाजसेवा गर्ने उनको तरिका अरुको भन्दा फरक छ । त्यसैले किरा परेका, धेरै दिनसम्म जकडिएका, डुङडङती गन्हाएका शवहरु बस्नेतका साथीहरु हुन् । उनको साथमा कोही छैनन्, परिवारका सवैजना उनीदेखि टाढिएका छन् । परिवारको नाममा कोही भएनन् । जब बुवाको निधन भयो, जीवनले अर्कै बाटो तय गरिदियो । साथीको घर जान्छु भनेर निस्किएका महालेखाका सहसचिवसमेत रहेका उनका बुवा श्यामबहादुर बस्नेत दुई दिनसम्म घरमा फर्किएनन् । दुर्घटनामा परेर बुवाको मृत्यु भएको पछिमात्र थाहा भयो । उनको शब शिक्षण अस्पतालमा राखिएको रहेछ । बुवाको शव वेवारिसे शवगृहमा थियो । समाजका गन्यमान्ने मेरा बाले सरकारी जागिर सहसचिव जस्तो उच्चपदमा काम गरेका थिए । तर हामी चार चार जना छोराछोरी भएरपनि मरणोपरान्त पानीसमेत खुबाउन पाईएन बरु लास खोज्दै बेवारिसे शवगृहमा पुग्नु पर्यो ।
उनले नेपालबहस डटकमसँग भने –‘आज सबैले देखेको छ तर भोली कसैले देखेको छैन । ‘आफना बालाई बेवारिसे शवगृहमा खोज्न जाँदा विनयका आँखाले कुहिएका, डुङडुङती गन्हाएका चाङकाचाङ लासहरु देख्न पुगे । त्यो समयमा यी वेवारिसे शवलाई के गरिन्छ अब भनेर गार्डलाई सोधेका थिए उनले । गार्डको सहज जवाफ थियो ‘ यी शव लग्न नगरपालिकाको गाडी आउछँ र सामुहिक रुपमा एउटै खाल्टोमा पुरिन्छ । त्यसपछि कुकुरले खोस्रेर खाला, कौवाले च्याती–च्याती खाला ।‘ ती गार्डको कुरा अनि आफुले प्रत्यक्ष देखेभोगेको सडेर कुहिएका, डुङडुङती गन्हाएका, सुकेका बेवारिसे शबलाई अब जसरीपनि सद्गत गर्छु भन्ने अठोट विनयले त्यही गरे ।
बेवारिसे शवको व्यवस्थापन गर्ने सोच त बनाए तर त्यो समयमा बस्नेत दुर्व्यसनमा चुर्लुम्ब डुबेका थिए । परिवारबाट एक्लिएका थिए । ‘उनलाई बाबा भनेर बोलाउने छोरी पनि टाढिइन् । मलाई छोरा भनेर बोलाउने बाबा पनि स्वर्गवास भए, अर्धाङगिनीपनि साथमा थिइनन् ‘ उनले एकै सासमा भने ।
आफै नै बेवारिसे बनेको महशुश गर्न थाले उनले । आजभन्दा चार बर्ष अगाडि ललितपुरको इमाडोल भएर बाटोमा हिड्दै थिए । कृष्ण मन्दिरमा धेरै दिनदेखि अलपत्र भएर पल्टिएको एकजना मानिसलाई देखे उनले । वरिपरिका मानिसहरु प्रहरी आएर जे गर्ने हो गर्छ भन्दै रमिते बनिरहेका थिए । विनयलाई अरुजस्तो मुखदर्शक बनेर बस्न मन लागेन । बेवारिसे अवस्थाका ती व्यक्तिलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने आशामा उनले अस्पताल लगे तर केही दिनमा उनको सास अस्पतालमै गयो । उनले नेपालबहससँग भने ‘४५ दिनसम्म पनि बेवारिसे बनेको ती मान्छेको शव लिन कोही नआएपछि कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर दाहसंस्कार गरे ।‘
उनले भने ‘ बेवारिसे शवहरु कुहिएर एउटै खाल्टोमा हुन नपरोस् , दिवंगत आत्माले मुक्ति पाओस भनेर बेवारिसे शव व्यवस्थापन गर्ने अठोटकासाथ अभियान सुरु गरे ।‘
बेवारिसे शव व्यवस्थापन गर्नका लागि चरम आर्थिक अभाव व्यहोर्नु पर्यो तर खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भने झै बस्नेतले पैत्रृक सम्पती घरजग्गा सहकारीमा धितो राखेर ,बेवारिसे शव व्यवस्थापन तथा पुर्नजीवन केन्द्रको स्थापना गरे ।
चार वर्षयता उनले ४ सय ४३ बेवारिसे शवको दाहासंस्कार गरिसकेका छन् । बस्नेतले भने ‘ एउटा शव जलाउदा दशदेखि १२ हजार खर्च लाग्छ । तर सानो सुकेको लाश छ भने चिनी, घ्युउ,दाउरा थोरै लाग्छ, दश हजारजति भए पुग्छ । मोटो ज्यान भएको शव भए त १२ हजार लाग्छ, । आजकल बेवारिसे शव, बेवारिसे भएका मानिस बाटो, पाटीर्, पौवा र अस्पतालमा छन भने संस्थामा फोन गर्छन् । ३ सयभन्दा बढी बेवारिसे शवको स–सम्मान दाहसंस्कार गरिदिन संस्थामा पत्र आएको छ तर विडम्बना ! आर्थिक अभावका कारण मैले समयमा नै दाहसंस्कार गर्न पाएको छैन् । ‘
पशुपति आर्यघाटमा बेवारिसे शव जलाउने विनय एक्ला व्यक्ति हुन् । प्रत्येक दिन बेवारिसे शव देख्दापनि उनलाई दिक्क भने लाग्दैन् । विनयले भने ‘कतिपय मानिस शव अगाडि पदैनन् ,घिन मान्छन्, कोही डराउँछन् । तर मलाई भने बेवारिसे शवको माया लाग्ने गर्छ । शव कुहिएर किरा परेर नगन्हाओस् भन्ने हुन्छ तर त्यही भैदिन्छ, । ती बेवारिसे शवलाई जलाएर जब भौतिक शरीर खरानीमा परिणत हुन्छ , तवमात्र मेरो मन आन्नदित हुन्छ ।‘
घर निर्माणमा १२ जना सिमित व्यक्तिले मात्र सहयोग गरेको उनले बताए । उनले भने ‘ मेरो अभियानमा ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, धु्र्मुस–सुन्तली फाउण्डेशन लगायतले सहयोग गरेका छन् ‘ । सहयोगी मनहरुको नाम फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेको उनको भनाई थियो । जग्गा धितो राखेर यो अभियान शुरु गरेका बस्नेतले दाहसंस्कार गर्नका लागि आर्थिक अभावका कारण बाइकसम्म बेचेको हृदयस्पर्सी कथापनि नेपालबहस डटकमलाई सुनाए ।
यसरी दुर्व्यसनले विनयको जीवन उजाडियो
रमाइलो गर्ने बाहनामा साथीहरुसँग घरका अभिभावकलाई छलेर लहलहैमा चुरोट पिउन शुरु गरे । आन्नद लिने नाममा साथीहरुसँगै रक्सी पिउनपनि शुरु गरे । त्यतिबेला उनले कल्पनासम्म गरेका थिएनन् कि आफु रक्सीको एडिक्ट नै हुन्छु भन्ने । हुन त मान्छे कहाँ बिग्रिन्छु भनेर सोच्छ र !
मादकपदार्थ तथा दुर्व्यसननीका कारण जीवन नै उजाड हुने तरिकाले उनी फसे । छोरी, श्रीमती, आफन्तजन सबै गुमाए । १५ बर्षको उमेरमा आमालाई गुमाए अनि बाबाको साथपनि टुटिसकेको थियो । तब बस्नेतको दैनिकी बन्न थाल्यो भेटेका मान्छेसँग निहूँ खोज्ने, लडाई–झगडा गर्ने, बाटो–बाटोमा पल्टने, सुत्ने । कहिले घरको बास, कहिले बाटोको बास हुन थाल्यो । रक्सी तथा लागुपदार्थ उनका लागि सबथोक बन्यो । त्यहीकारण परिवार–समाज एकातिर उनी अर्कोतिर हुनपुगे । परिवारले सहिमार्गमा ल्याउन अनेक प्रयास गरे । उनले मलिन हुँदै भने, ‘श्रीमतीले सुधार गर्न अनेक प्रयास गरिन । हामीले प्रेमविवाह गरेका थियौं त्योपनि अन्र्तजातिय । तर मेरो व्यवहारबाट आजित भएर उनी छोरीसँगै माईतीमा बस्न थालिन् । ‘
‘त्यसपछि बिनयको घरमा ३ बर्षसम्म बिजुली बत्ती बलेन । विधुतको लाइन नै काटिएको थियो । ३९ बर्षीय बस्नेतले भने ‘ राती उज्यालो देख्दा खुशी मान्थे । घरमा उज्यालो बनाउन साथीहरुको घर गएका बेला आँखा छलेर मैनबत्तीका टुक्रा टिपेर ल्याउँथे ‘उनी भाबुक भए ।
विगतलाई सम्झदै विनय भन्छन् ‘जब चाडपर्व आउथ्यो उनी घरभित्रै लुकेर बस्थे । कोही टिका लगाउन आएभने भन्ने उनलाई डर भैरहन्थ्यो । तर सबैतिरबाट बहिस्कृत मेरो घरमा कोही आउदैनथे ।’
कसरी भए विनय पुर्नजीवित
दुव्यर्सनमा चुर्लुम्ब डुबेका, आफनै संसारमा रमाएका विनयलाई भेटन् अमेरिकाबाट मामाका छोरा नबीन खड्का ३ पटकसम्म घरमा गए तर भेट भएन् । विनयकी बहिनी भावनाले मामाका छोरालाई विनयलाई जसरी पनि भेटेर जानु दाजु, अर्कोपटक आउँदा सायद ऊ यो संसारमा रहदैंन होला भनेपछि नविन फेरि आएर धेरै सम्झाए । चोभारमा रहेको रिहाव सेन्टरमा उसैले खर्चपानी व्यहोर्ने निर्णय भयो । तीन महिना सेन्टरमा बसेर पुर्नजीबित भएर ललितपुरको टिकाथलीस्थित घरमा फर्किए । अनि आफुजस्ता बेसाहाराहरुको साहारा बन्ने निर्णय गरेअनुसार यो उनले संस्था खोले ।
तर असल श्रीमान, कुशल अभिभावक बन्न नसकेकोमा उनलाई पछुतो छ । श्रीमती अहिले दुवईमा छिन्, छोरी अस्ट्रेलिया । उनले नेपालबहससँग भने ‘पहिला मलाई सपार्न खोज्दा मैले बेवास्ता गरे ‘ उनले मलिन हुँदै भने ‘मेरी श्रीमती संसारकी बेस्ट थिइन् । ‘पछुताउनु बाहेक अरु के नै गर्न सक्छु र म अब ! सायद मैले धेरै दुख दिएर होला मप्रतिको माया मैले नैे मारे ।
विगत चार बर्षदेखि बेवारिसे शव व्यवस्थापन र बेवारिस बनेका मानिसहरुको उनी साहारा बन्दै आएका छन् । दुव्यर्सनमा फसेका तीन दर्जनभन्दा बढी मानिसलाई निशुल्क उपचार दिदैँ आएका छन् । बेसाहारा भएका ३० जनालाई टिकाथलीस्थित घरमा निशुल्क रुपमा बस्ने व्यवस्था मिलाएका छन् ।
बेसाहाराहरुको साहारा बन्ने उदेश्यले रु. १ करोड ५० लाख बराबरको पैत्रृक सम्पतिमा बेसहारा ‘बा–आमा’ घर निर्माण भैरहेको उनले बताए । घर निर्माणमा १२ जना सिमित व्यक्तिले मात्र सहयोग गरेको उनले बताए । उनले भने ‘मेरो अभियानमा ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, धु्र्मुस–सुन्तली फाउण्डेशन लगायतले सहयोग गरेका छन्‘ । सहयोगी मनहरुको नाम फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेको उनको भनाई थियो । जग्गा धितो राखेर यो अभियान शुरु गरेका बस्नेतले दाहसंस्कार गर्नका लागि आर्थिक अभावका कारण बाइकसम्म बेचेको हृदयस्पर्सी कथापनि नेपालबहस डटकमलाई सुनाए ।
विगत १९ बर्ष बर्षदेखि रेडियोमा बोल्दै आएका उनले अहिले विभिन्न रेडियोमा दुव्यर्सनका विषयमा जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दैै आईरहेका छन् ।
मुख्य त दुव्यसर्नको कारण समुदायमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी बेवारिसे बनेको भन्दै दुव्यर्सनका विषयमा सरकार समयमा नै चनाखो हुनपर्ने उनले बताए । उनले भने, बेवारिसे शव व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकार र समुदाय हातोमालो गरेर जानुको विकल्प छैन् । बेवारिसे शव व्यवस्थापनका लागि हालसम्म २३ जिल्लामा शाखा खोलेको उनले बताए । उनले भने, बेवारिसमुक्त देश बनाउने मेरो उदेश्य हो । भगवान भन्छन् रे ! त आँट म पुर्याउछु ।
२०७५, २१ पुष, 02:31:53 PM